Moscow State Institute of International Relations - Kudzidza mhiri
inotangwa : 1944
Musakanganwa kuti kurukura Moscow State Institute of International Relations
Kunyoresa pana Moscow State Institute of International Relations
MGIMO chinonyanya nomukurumbira urongwa reRussia dzidzo vechidiki vane zvinodiwa dzakawanda. For vadzidzi dzakawanda, MGIMO ndechokuti uye zvakawanda: rechimanjemanje, kugamuchira, uye noruzivo hwaifadza nzvimbo kudzidza muguta mukuru reRussia.
mudzidzi muviri MGIMO raMwari akasiyana-siyana pamusoro 6,000 iri inobva kumusoro panhengo kwevadzidzi Russian uye kubva shamwari mumayunivhesiti munyika. MGIMO inopa zvakawanda makosi panguva Rokutenderwa uye akapedza kudzidza mumatunhu - kubva dzenyika, political sainzi, dzezvoupfumi, uye dzakawanda mutemo, kuti nhau, bhizimisi utariri, uye simba urongwa. undergraduates International anogona kushandisa kwenguva zvizere Chirungu-vakadzidzisa B.A. chirongwa kana kusarudza kubva akaoma uye zvinofadza makosi Russian. Students kutsvaka Tenzi dhigirii anogona kushandisa mumwe miviri dhigirii zvirongwa MGIMO kuti groundbreaking, zvaipiwa achidyidzana pamwe dzakawanda masangano, kana kutsvaka nzvimbo mune rimwe zvirongwa anopfuura matatu MA achidzidzisa Russian.
Nokuti zvose nhoroondo yacho, MGIMO ari kuramba remake pacharo. Mumakore mashanu apfuura, yunivhesiti akaumba kudyidzana itsva zvakawanda pamwe kutungamirira zvikoro munyika. MGIMO ari kusanganisa zvakazara kupinda Bologna Kunoenderana, chiperengo panze muchinyatsongwarira zvaanoda European yepamusoro nemasangano kudzidza. The University iri vakazvipira kukudziridza inoramba Virtual muviri mudzidzi, hweutungamiri, uye kembasi upenyu kuti anoramba kuratidza mukurumbira wayo sezvo vakawanda nomukurumbira uye zvemberi nzvimbo reRussia nokunzwisisa zvinhu dzakawanda.
MGIMO rinonyanya kuzivikanwa uye zvikuru nomukurumbira nevanhu inisitichusheni reRussia. Hazvina kirasi nyika mupfungwa yose rokuti – mukurumbira umbirimi, sununguka, coeducational, uye akapiwa pachena. MGIMO kuti nomwe zvikoro uye ne vana edzidzo Ndigopoteredza madhipatimendi vakawanda zvechikoro, mapoka, uye mubayiro zvirongwa, uyewo interdisciplinary nzvimbo uye kwesayenzi basa zvirongwa Achitambanudzira zvinopfuura chinyakare departmental miganhu.
yunivhesiti reRussia zvikuru pose, MGIMO kwave musha Russian vadzidzi vaibva munyika yose kuti anenge 60 makore, kugovera kupfuura 5,000 remarudzi apedza dzidzo kuti seshizha vatungamiriri vari voga uye voruzhinji chikamu munyika yose. Pamusoro pe, MGIMO ane pedyo ukama nzvimbo dzenyika kutungamirira yedzidzo, mhiri Europe, Asia, America, uye Africa. MGIMO prides pachayo munyika pfungwa uye MGIMO ndiye musha vadzidzi pose.
MUNYIKA YOSE ZVAKAKWANA
MGIMO University aiva mumwe wokutanga mumayunivhesiti yeRussia kukumbanira European Africa Association, uye ari signatory kuna Bologna Kunoenderana. The MGIMO uzivi rinopa muripo nokuda Bachelor uye Mudzidzisi dhigirii zvirongwa izvo kuzivikanwa pasi pose, nevadzidzi kuwana zvinodiwa izvo makiyi basa uye zvedzidzo mikana dzemunyika. MGIMO Honorary Doctorates kunge akaiswa pamusoro yose yokufeva.
WIDE CHOKWADI sarudzo
MGIMO University inopa pakati widest siyana zvirongwa zvedzidzo uye specializations remumwe yunivhesiti yacho mhando kwese. Panyaya kupa vadzidzi chechinyorwa kunzwisisa dzinoitwa nyika - Ngazvive kuburikidza dzakawanda nezvibvumirano, voruzhinji Kutarisirwa, bhizimisi, dzezvoupfumi, mutemo, uye nhau, tisingatauri 53 mitauro rinodzidzisa - MGIMO rakasiyana.
Hunoshamisa KWEMHOSVA ZVINOWANISA
MGIMO University anounza pamwe zvakanakisisa zvinoumba kusununguka Arts kukoreji neavo huru tsvakurudzo yunivhesiti. Izvi zvinopa vadzidzi pedyo kuwana kupfuura 1200 mapurofesa uye fakaroti nhengo, kusanganisira 20 azere nhengo uye runoenzanirana nhengo mbiri Russian Academy of Sciences, imwe 113 vanachiremba sayenzi uye 400 doctorate sayenzi musarudzo. MGIMO kwakaita academia anodada vadzidzi ayo.
WORLD mukurumbira NEVANOTSVAKURUDZA
With mukurumbira wakanaka uye zvedzidzo chinzvimbo MGIMO aigara pokutanga zvikuru yunivhesiti ratings. Kutsvakurudza Its chinoshanda munyika yose kuburikidza collaborations vane achitungamirira tsvakurudzo Kudya muRussia, Kishi nyika, and around the world.Pasi amburera pakati kuBazi Affairs Foreign, MGIMO chinhu vanoremekedzwa nomutemo vanofunga-tangi uye Forum yegakava uye kuongorora dzakawanda zviitiko uye Current Affairs, pamwe mipiro yayo yose pachisara zvikuru vakatsvaka.
Kubvira pakutanga kwayo MGIMO zvakaratidzwa uye uzivi akabatanidza chinyakare zvedzidzo nehasha vane ungwaru utsanzi. YeYunivhesiti Innovative Educational Program, chinozoiswa pamusoro 2007-2008, akavandudza dzayo Kusimbisa kukwaniswa inobva dzidzo. Chirongwa Akaonawo MGIMO kukudziridza itsva yepamusoro gadziriro kuratidza wepanguva zvesayenzi uye dzidzo kuitika, mutsva vakuru maitiro uye michina, uye yokukwezva vatungamiriri dzakawanda yedzidzo.
Yunivhesiti iri raizivikanwa dzingaparwe zvakaisvonaka, zvichireva chakajeka vatungamiriri reRussia ramangwana kudzidza ikoko zvino, ane kuwedzera nhamba dzavo dzomunyika vavanomirira. Gore negore yakanakisisa kudzidza kusekondari reRussia vanokwikwidzana kweinenge chiuru vatsva munzvimbo, nevamwe zvirongwa – kunyanya dzezvoupfumi, mutemo, uye dzakawanda ukama – ndine kusvika 30 vamhan'ari nechimwe nzvimbo.
MGIMO kudzidza zvinosanganisira mapurezidhendi, pasvikira, uye vashumiri vatorwa kuAzerbaijan, Arumeniya, Belarus, Bharugeriya, Khazakisitani, Mongoriya, Sirovhakiya, Ukraine uye dzimwe nyika.
ROMUNYIKA YOSE network
MGIMO rinopa kwete chete yepamusoro dzidzo, asi chinhu isingaenzaniswi mukana wokuwana vokukurukura nyanzvi izvo zvichaita kutsungirira zvakanaka zvinopfuura kudzidza. Its zvakaoma uye kwakaoma zvedzidzo kuumbwa ari kuzadzikiswa kunoitwa utano pamagariro mamiriro ezvinhu apo mudzidzi munharaunda uye alumni inongosvikika chaizvo uye kugamuchira Vadzidzi yokumwe. Mumamiriro ezvinhu aya vadzidzi nhasi vanogona kuva shamwari mangwana dzakawanda enyika, zviri pamutemo, zvebhizimisi uye nemagariro vatungamiriri.
Beyond kudzidza, MGIMO vadzidzi vanozoridza pedyo vakawanda Concerts, vachitamba, Comedy usiku, uye zviitiko ose atingafungidzira mutambo. Various Masangano mudzidzi vazadze karenda zvimwe evanhu zviitiko. Ehe saizvozvo, MGIMO riri muMoscow, rimwe remaguta makuru enyika, ane siyana netsika uye nhoroondo pfuma, noutano tsika, ikapenya Nightlife. Rinopawo nyore kuwana siyana uye simba pamusoro wepanguva Russia, netsika nhaka yaro paakaita. MGIMO chinhu chinoshamisa upenyu chiitiko vadzidzi dzakawanda.
School of International venhau
School of International Business uye Business Administration
School of Zvakarurama Economics uye Commerce
International Institute of Energy Policy uye Nezvibvumirano
School of Government uye International Affairs
MGIMO, izvo, muna Russian, anomirira Moscow State Institute of International Relations, chake chaibva pane October 14, 1944 kana USSR Council Vanhu vaJehovha Commissars kurongwazve ichangobva akasika School of International Relations of Moscow State University mu yakazvimirira sangano. Pakutanga kunzi Institute of International Relations (IMO) yayo yokutanga 200 vadzidzi vaiva mhare vakanga vapona vatsungirire of Second World War uye vakanga vakatsunga kuvaka rugare dzakawanda uye kutsiga.
Kubva pakutanga MGIMO akaitirwa kuva akasiyana zvedzidzo tsvakurudzo uye dzidzo centre. It rwakakurumidza kutungamirira nedzenyu nokudzidziswa sangano reRussia, pamwe MGIMO renyanzvi kuita mupiro rakakura mhiri minda dzakawanda ukama, nyika uye zvenharaunda zveBhaibheri, mutemo dzakawanda uye dzakawanda mamiriro ezveupfumi. Mukuwedzera, zvakatora nzvimbo nechemberi nesayenzi kutozoedza, pakatangwa anoverengeka nyika zvikoro mukurumbira dzesayenzi, uye sezvo kwatinoshandira nemasayendisiti akawanda hunoshamisa Russian, kusanganisira Academy of Sciences nhengo E.Tarle, L.Ivanov, V.Trukhanovskiy, S.Tikhvinskiy, N.Inozemtsev, uye Y.Frantsev.
Pakutanga MGIMO Kunoumbwa zvikoro matatu: School of International Relations, School of International Economic Relations uye School of Law International. vadzidzi International vakatanga kuuya MGIMO kubva 1946. Kubvira ipapo MGIMO alumni vave basa renyika, nedzenyu uye zviri pamutemo vatungamiriri munyika dzakawanda, wandei kuva Vashumiri Foreign, vakuru hurumende, uye kunyange Coal.
mu 1954 ari Moscow Institute of Oriental Studies, mumwe mukuru Kudya Russian uye mutsivi Lasarevsky School akasikwa 1815, akanga revatema kupinda MGIMO. raibhurari The Institute yakanga kunowedzerwa zvikuru kuwedzera yakakurumbira Lasarevskaya raibhurari, wakange asina kufurirwa kuti muviri wayo huru yokuMabvazuva mabhuku.
mu 1958 MGIMO vaumbe Institute of Foreign Trade, rakanga kare kushanda pasi aegis of USSR Choushumiri kuti Foreign Trade. Izvi zvakaita kuti pave nokuwedzera School of International Economic Relations uye Kusimbisa kudzidzisa dzimwe zvokutengeserana uye zvoupfumi unyanzvi. mu 1969 International venhau School rakaumbwa.
Mukupera 1980s uye mangwanani kuma1990, kukuru zveupfumi shanduko kutsvaira Russia akaona kuchinja zvikuru marongerwo uye dzidzo zvirongwa MGIMO raMwari. mu 1991 mumwe School itsva International Business uye Business Administration rakaumbwa.
kubva 1992 Institute rave inotungamirirwa ari Rector, Professor Anatoly Torkunov, vane utungamiri rave richishanda nokukurira nyonganyonga kuma1990. Under gavhuna MGIMO akaita atanga misoro purogiramu mazuvaano inodzidzisa uye utsanzi, kusanganisira pedyo kusangana ne European yepamusoro dzidzo, kuburikidza vapinde Bologna muitiro, ari achiwedzera kuti dzakawanda vokukurukura, uye kukwidziridzwa pamusoro Institute kusvikira pamberi dzidzo dzakawanda uye nesayenzi.
mu 1994 MGIMO akapiwa University chinzvimbo. Chete gore akaona pakusikwa International Institute of Administration, zvichitevera sarudzo parutivi Hurumende Russian pamusoro hurumende yaitonga matunhu neminisiparati utariri kurovedzwa. 1998 akaona kuvambwa School of Political Science, rokutanga ayo mhando muRussia pfungwa kurovedza rinoitirwa mamaneja.
mu 2000 International Institute of Energy Policy uye Nezvibvumirano rakavambwa, pasi aegis pamusoro MGIMO, pamusoro chirongwa rokupinza Russian simba Makambani. Basa iri Institute ndiko kudzidzisa Mamaneja kuti kusimudzira dzakawanda simba pamwe.
MGIMO zvaJehovha European Educational Institute rakaumbwa 2006, Kufunga vagari kuitwa ne Russian Federation uye European Union kuronga kuramba zvirongwa dzidzo Russian uye European machinda.
2011 rakaona kuvambwa chikoro MGIMO wokupedzisira, Chikoro pamusoro Zvakarurama Economics uye Commerce. Zviri rakasiyana ayo BA chirongwa Ecology uye Wildlife Management, iyo anovandudza unyanzvi mumunda zveupfumi uye zvipenyu nyaya.
Gore MGIMO anogamuchira vadzidzi vatsva vanopfuura chiuru chimwe, kubva ose chikamu Russian Federation, uye rese kubva kupfuura 60 nyika. pamusoro 35 zviuru Russian uye pasi pose alumni vanozvikudza kuti kudzidza Moscow State Institute of International Relations. Mapoka MGIMO Alumni Association vari kushingaira munyika dzakawanda pasi pose. mu 2007, ari MGIMO Alumni Association hwakagadzwa Russia wokutanga yunivhesiti Endowment - the Development Foundation for MGIMO.
Unoda kurukura Moscow State Institute of International Relations ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Moscow State Institute of International Relations pamusoro Map
Photos: Moscow State Institute of International Relations pamutemo Facebook
Moscow State Institute of International Relations wongororo
Join kukurukura of Moscow State Institute of International Relations.